Wararka Maanta: Isniin, Sept 3 , 2018-Shirka Siinaha iyo Africa oo maanta ka furmaya magaalada Beijing
Isniin, September, 03, 2018 (HOL)- Maanta oo Isniin ah waxaa ka furmaya magaalada Beijing shirka u dhaxeeya Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC) oo ay sanadkan ka qeyb galayaan ku dhawaad madaxda 53 dal oo qaarraada ka tirsan.
Kulanka ayaa inta uu socdo waxaa lagu eegi doonaa iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga, hiigsiyada cusub ee iskaashiga dhaqaale, iyo dadaallada lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka Africa.
Dhinaca Soomaaliya marka la eego kulanka waxaa ka qeybgalaya wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidoo kale ay wehliyaan ganacsato Soomaaliyeed.
Inkastoo qodobada diirrada lagu saaray kulanka u bad-naan doonaan xiriirka ganacsiga labada dhinac Shiinaha iyo qaarrada Africa iyo her-galinta mashaariic hormarineed Soomaaliya shirkan waxaa ay uga faa’ideysan doontaa sidii ay u soo jiidan laheyd idhaha dowladda Shiinaha marka laga eego dhanka fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira dalkeenna.
Madaxweyne Farmaajo oo maalmo ka hor gaaray Beijing ayaa kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Shiinaha, waxayna ka wada hadleen dardar-gelinta xiriirka taariikhiga ah ee Shiinaha iyo Soomaaliya, kaas oo ku saleysan iskaashi iyo wax wada qabsi, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, diblumaasiyadda iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga la socda ayaa inta ay joogaan Shiinaha kulamo gaar gaar ah la qaadan doona qaar ka mid ah madaxda qaarradda ee kulanka ka qeyb-galiya.